अटोमोबाइल Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - मुख्यमन्त्री पौडेल अब विद्युतीय कारमा सरर...
हेटौँडा । ३ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका लागि विद्युतीय कार खरीद गरेको छ । सूर्या गुड्स सप्लाइ प्रालिमार्फत खरीद गरिएको चीनमा निर्मित बि वाइ डी कम्पनीको कार दुई घण्टा चार्ज गरेपछि ४०० किमीसम्म चल्ने ३१७ भोल्ट क्षमताको रहेको छ । विद्युतीय कार १० वर्षसम्म सामान्य ब्याट्री मर्मत मात्र गरे पुग्ने बताइएको छ । पेट्रोल र डिजेलको कार–जीपभन्दा सञ्चालन खर्च निकै कम हुने विशेषता भएको सो कारको मूल्य रु ५५ लाखमा खरीद गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म ट्रक तथा टिपर सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको बैठकले चालक अनुमतिपत्र, ब्लूबुक प्रतिलिपी, हालसालै खिचिएको फोटोसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निवेदन दिने चालकलाई बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म ट्रक तथा टिपर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । लट पुगेपछि दशैँअघि देखि रोकिएको बाग्मती अञ्चलको मोटरसाइकल दर्ता शुक्रबारदेखि खुल्ने भएको छ । यसअघि अञ्चलका नाममा दर्ता भएका मोटरसाइकल मन्त्रिपरिषदले प्रदेशको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि शुक्रबारदेखि दर्ता खुल्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि शुक्रबारदेखि बाग्मती अञ्चलका मोटरसाइकल प्रदेशका नामबाट दर्ता हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
रमाईलो दशैंतिहार योजना, बम्पर उपहार मोटरसाइकल !
काठमाडौंं । चाबहिल चुच्चेपाटीमा रहेको केएल टावरले विजयदशमी तथा दिपावलीको अवसर पारेर असोज १९ गतेदेखि रमाईलो दशैं तिहार उपहार योजना संचालनमा ल्याएको छ । यस योजनामा ग्राहकले प्रत्येक दिन हात खाली नजाने उपहार पाउने छन् । हरेक दिन उपहार जित्न सकिने योजनाको बम्पर उपहारमा टिभिएसको अपाची आरटीआर मोटरसाइकल, जुपिटरको स्कुटर लगायतका उपहार राखिएका छन् । दैनिक उपहारमा सिनेमा टिकट, सपिङ भौचर, स्मार्टफोन, लगायत छन् भने साप्ताहिक रूपमा मलले टिसिएल र गोदरेज ब्राण्डका वासिङ मेसिन, टेलिभिजन, फ्रिज लगायतका घरायसी सामान उपलब्ध गराउने टावर व्यवस्थापनले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ–लुम्बिनी पर्यटकीय बस शुरु, शौचालयदेखि चुरोट पिउने सुविधा
काठमाडौँ । ट्राभल नेपाल बस सर्भिसेज प्रालिले पहिलोपटक काठमाडौँदेखि मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीसम्म पर्यटकीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअघि काठमाडौँ–पोखरा बस सञ्चालन गरेको ट्राभल नेपालले आज बिहानदेखि काठमाडौँ–सुनौली हुँदै लुुम्बिनीसम्म बस सञ्चालनमा ल्याएको हो । ट्राभल नेपालले यसअघि नै लुम्बिनी बस सञ्चालन गर्ने भनेपनि मुग्लिङ–नारायणघाटको बाटो र पूर्वाधारका कारण सञ्चालन गर्न सकेको थिएन । प्रालिका सञ्चालक प्रल्हाद लोहनीले लुम्बिनीको लागि तीनवटा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बस सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्
दशैँमा घर जादै हुनुहुन्छ ? आफ्नो जिल्लाको नयाँ भाडादर थाहा पाउनुहोस !
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर कायम गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले शहरी क्षेत्र र लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको हो । शनिबार सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार नयाँ भाडादर कायम गरिएको हो । विभागको नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा न्यूनतम भाडादर रु १४ कायम गरेको छ भने अधिकतम रु २७ हुनेछ । न्यूनतम चार किलोमिटर यात्रा गर्दा यात्रु रु १४ तिर्नुपर्नेछ । साविकमा रु १३ न्यूनतम भाडा भए पनि सवारी साधनले यात्रुसँग रु १५ लिँदै आएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौंमा अटोमोबाइल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु
काठमाडौं । विश्व अटोमोबाइल सङ्गठन ‘फेडेरेशन इन्टरनेशनल अटोमोबाइल्स (एफआईए)’को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट (असोज १ गतेदेखि) काठमाडौँमा शुरु हुँदैछ । नेपाल अटोमोबाइल एशोसिएशन (नाडा) ले दिएको जानकारी अनुसार दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपालबाहेक करीब २५ देशका ४० जना र नेपालका २० जना अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व गरी ६० जनाको उपस्थिति रहने छ । सम्मेलनको उद्घाटन सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महाशेठले र समापन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
१३औं नाडा अटो–शो सुरू, ६ दिनसम्म चल्ने
काठमाडौं । यस वर्षको नाडा अटो–शो आजबाट सुरु भएको छ । सवारीसाधन र यसका डिलर्सहरुको महाकूम्भ मेलाका रुपमा हेरिने मेलामा यस वर्ष बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको स्टलहरु भने छैनन् । हरेक वर्ष आयोजना हुने नाडा अटो शो मा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्ना विभिन्न स्किमसहित स्टल राख्ने गरेका थिए । तर, ठाउँ अभावका कारण नाडा अटोमोबाइल्स् एशोसियशन अफ नेपालले यस वर्ष बैंक र बीमा कम्पनीलाई स्टल राख्न नदिने जनाएको हो । मेलाका संयोजक निराकर श्रेष्ठले विगत झै यस वर्ष पनि बैंक र बीमा कम्पनीहरुलाई स्टल दिने योजना बनाएको भए पनि ठाउँ अभाव भएकाले दिन नसकिएको बताए ।	थप पढ्नुहोस्
राजधानीमा ‘टुटल’ प्रयोगकर्ताहरु बढ्दै
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा ‘टुटल’ प्रयोगकर्ता बढ्ने क्रम जारी रहेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने, यो नेपाली माटो सुहाउँदो उद्यम जस्तै देखिएको छ । स्थानीय स्रोत र प्रविधिको संयोजनबाट व्यावसायिक तथा सामाजिक हितका काम गर्ने युवाको सङ्ख्या बाक्लिँदै छ । यस्तैमा विगत २ वर्षअघि स्थापना भएको ‘टुटल’ले राजधानीमा मोटरसाइकल तथा स्कूटरमा यात्रा साझेदार बनेर हजारौं यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ । अव्यवस्थित शहरीकरण, बढ्दो ट्राफिक जामलगायत समस्याले राजधानीका यात्रुले दिनहुँ कष्ट भोग्दै आएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई गिज्याउँदै चाबहिल–साँखु र कलंकी–नागढुंगा सडक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खाल्डाखुल्डी मर्मतसहित सडक विस्तारका क्रममा बाँकी रहेका काम तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी र कलङ्की–नागढुंगा सडकको अनुगमनका क्रममा तीव्र गतिमा सडक विस्तारका काम हुन नसकेको पाइएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सडकमा रहेका बिजुली र टेलिफोनका पोल तथा तार हटाउन निर्देशन दिएको हो ।	थप पढ्नुहोस्